Ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny Photoshop
«File: Lonely Lampione (tsy Photoshop) - panoramio.jpg» avy amin'i Salvo Cannizzaro dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-SA 3.0
Raha misy programa tena ilaina ho an'ireo mpaka sary, mpamorona sary, mpanao sary, mpanao dokambarotra ... tsy isalasalana fa Adobe Photoshop. Izy io dia fitaovana matihanina izay tsy azonao atao maimaimpoana, fa ny fividianana izany dia hitondra tombony lehibe ho anao raha miasa amin'ireo sehatra ireo ianao.
Fa inona no azontsika atao amin'ity programa malaza ity?
1 Hanova sary
2 Famoronana endrika
3 Famoronana sary nomerika
4 Fanontana horonan-tsary
7 Miaraha miasa amin'ny sary 3D
8 Vokatry ny famoronana
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe amin'ny Photoshop dia ny fanovana sary. Fantatra eran'izao tontolo izao, ity fitaovana ity dia tena ilaina amin'ny mpaka sary sy mpamorona sary izay mampiditra sary amin'ny asany. Hahafahantsika manapaka sary, mamorona mifanohitra hafa, manova loko ... ary snsetera lava.
ihany koa manana galeran'ny sivana misy toerana misy anao, izay ahafahanao mamorona sary kanto kanto na manome azy ireo mikasika hafa.
Azo atao aza ny mamerina mamerina ny sary taloha mba hadio araka izay azo atao, toy ny namboarina ankehitriny.
Betsaka ny fampianarana manadihady ny fahafaha-manao ny sary Photoshop, satria tsy mora ny mahafantatra azy rehetra.
Na eo aza ny lazany ratsy amin'ny famoronana vatana tsy tena izy ao amin'ny sarin'ireo gazety sy tambajotra sosialy, tsy tokony homena tsiny ny programa, satria ilay mpaka sary no manome fiainana azy
Photoshop dia programa manandanja ho an'ny mpamorona sary, satria hahafahan'izy ireo mampivelatra ny asany amin'ny fomba feno. Ny programa famolavolana hafa, toy ny Adobe Illustrator sy Adobe Indesign, dia manana fitaovana azo ampidirina ao amin'ny Photoshop.
Afaka mamorona logo, karatra, carte postales sy snsetera lava isika. Azo atao ihany koa ny manaingo ny Photoshop, izay hitarika antsika hanana fahafaha-mamorona bebe kokoa.
Famoronana sary nomerika
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny sary dia mampiasa ny tontolon'ny nomerika mba hampiroborobo ny zavatra noforonin'izy ireo. Misy fomba samihafa handokoana nomerika:
Ny fampiasana ny totozy amin'ny solosaina, izay sarotra kokoa.
Ny fampiasana takelaka sy penina nomerika, izay ho lasa toy ny fizotry ny famoronana nentin-drazana ary ho mora kokoa amin'ilay mpanao sary.
Photoshop dia hamela anao hamorona kapoka mitovy amin'ny menaka, watercolor ary na spray aza. Mila mahafantatra fotsiny ny fomba fikirakirana ireo fitaovana ireo ianao, raha tsy izany dia mety ho dingana goavambe. Izany no antony anoroako hevitra anao mba handray fampianarana mifandraika amin'ilay lohahevitra, satria sarotra be ny mampianatra samirery miaraka amin'ity programa matihanina ity.
Ny fampiasana borosy ho an'ny Photoshop dia tsy manam-petra. Afaka manome fomba samihafa amin'ny zavatra noforonintsika isika tamin'ny alàlan'ny iray na hafa. Azonao atao koa ny mamorona anao manokana na misintona borosy fanampiny ho azy.
Ny iray amin'ireo fiasa tsy dia fantatra amin'ny Photoshop dia ny fanovana horonantsary. Na dia tsy io no safidy atolotra indrindra (misy programa manokana manokana ao), safidy tsara izany.
Ho an'ity dia tsy maintsy mamorona sosona ao amin'ny horonan-tsarinao ianao ary mamadika azy ho zavatra marani-tsaina hahafahany manova azy ireo.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony dia tsara ny maka làlana amin'io.
Ny famolavolana tranonkala dia zavatra ampiasain'ny programa matetika. Raha te hamorona tranokala mora foana ianao azonao atao ny manova araka izay itiavanao azy, matihanina maro no manolo-kevitra ny hampiasa an'ity programa ity. Modely, fanesoana ... tsy misy farany ny azo atao.
Ny endritsoratra dia zavatra lamaody ankehitriny. Afaka mamorona fehezan-teny mahafinaritra miaraka amin'ny sary tianao ianao, avy eo Photoshop dia mamela antsika manampy lahatsoratra amin'ny sarinay, manolotra fahafaha-manao endrika sy endriny maro.
Miaraha miasa amin'ny sary 3D
Ity programa ity hahafahantsika mamorona sary amin'ny lafiny telo, manome ny vokatry ny aloka, jiro ary lamba amin'ny sary 2D, ary afaka manova ny halalin'ny saha aza.
Vokatry ny famoronana
«File: MAINE - STONINGTON, HANCOCK CO - PHOTOSHOP WATERCOLOR FILTER (26) (45162723805) .jpg» avy amin'i ALAN SCHMIERER avy any atsimo atsinanana AZ, Etazonia dia voamarika amin'ny CC0 1.0
Afaka mamorona vokatra hafa amin'ny sary na sary isika. Ohatra, ianao dia afaka mamorona vokatra vita amin'ny lamba toy ny: hazo, beton, lamba, vera, taratasy, sns. Ny vokany izay mitranga rehefa atambatra ny sosona: opacity, fisehoana grainy, sns. Misy ihany koa ny sivana misy default amin'izany.
Ary ianao, fantatrao ve fa misy fampiharana hafa amin'ity programa malaza ity? Mandrosoa ary avelao aho amin'ny fanehoan-kevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny Photoshop
Jereo hoe inona ilay Matte painting mahavariana